July 2017 – NauloKhabar.com
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च, कास्कीको आयोजनामा साउन २१ गते पोखरा स्पोर्टस अवार्ड हुने भएको छ । खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्दै खेलकुदको विकासमा सघाउने उद्देश्यले मञ्च गत वर्षदेखि सुरु भएको पोखरा स्पोर्टस अवार्ड साउन २१ गते शनिबार […]
काठमाडौँ । वरिष्ठ कलाकार डिना वाङ्देलको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भर्जिनियामा निधन भएको छ । मेनिन्जाइटिस कारण ५५ वर्षको उमेरमा उहाँको निधन भएको वाङ्देलका नेपालस्थित आफन्त प्रज्ज्वल शाक्यले जानकारी दिए । भर्जेनिया कमन वेल्थ युनिभर्सिटीमा सह–प्राध्यापक […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आलोचनाकैबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । यद्यपि, सपथ ग्रहणमा मन्त्रीहरुको ‘ड्रेस कोड’लाई लिएर चर्चा भएको छ । केही समय पहिले राष्ट्रपतिको कार्यक्रममा सहभागि हुने पत्रकारलाई नै औपचारिक पोसाक लगाउन पत्राचार […]
पोखरा । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. ९ दरबारथोकमा रहेको दरबारथोक एड्भरटाईजिङ एजेन्सीमा ला ग्राण्डीका विद्यार्थीहरुले अध्ययन भ्रमण गरेका छन् । बुधबार एजेन्सीको कार्यालयमा ला ग्राण्डी ईन्टरनेशनल कलेजको सेल्स एण्ड एड्भरटाईजिङ विषय विविए छैंटौं सेमेष्टरकी […]
काठमाडौं— वैकल्पिक धारको राजनीतिको विश्वासिलो विकल्पका रुपमा हेरिएका साझा पार्टी र विवेकशील नेपाल दल बुधबार एकीकरण भएका छन्। नागरिक समाजका अगुवाको सहयोगमा दुई पार्टीबीच श्रृङ्खलाबद्धरुपमा चलेका वार्तामार्फत दुवै दलहरु एकीकरणको अवस्थासम्म आइपुगेका हुन्। समितिमा दुई […]
पोखरा, १० साउन । जन्मदिन मनाउने मानिसका आ–आफ्नै तरिका हुन्छन्, कसैले साथीभाईसंग घुमेर मनाउछन् त कसैले घर परिवारसंग रमाइलो गरेर जन्मदिन मनाउने गर्दछन् । कसैले भोज र पाटी जस्ता फजुल खर्च गरेर पनि जन्मदिन मनाईरहेका हुन्छन् […]
पोखरा, १० साउन । नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ,कास्कीले पोखराको पृथ्वीचोक क्षेत्रको फुटपाथ अतिक्रमण तत्काल रोक्न पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकासँग जोडदार माग गरेको छ । पोखराको पृथ्वीचोकस्थित नेपाल वायु सेवा निगमको स्वामित्वमा रहेको ‘सस्तो बजार’ प्रकरणसँगै त्यहाँ […]
मुलुकको इन्टरनेट सेवा एक देशमा मात्रै निर्भर रहेको सन्दर्भमा आगामी भदौदेखि त्यसको अन्त्य हुने भएको छ। नेपाल टेलिकमले आगामी भदौदेखि चिनियाँ इन्टरनेट ब्याण्डविथ पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने र भारतसँग मात्रै अन्तरनिर्भर रहेको इन्टरनेट सेवालाई बहुपक्षीय मार्गमा […]
फेसबुकले ल्याउँदैछ आफ्नै स्मार्टफोन ?
फेसबुकले अहिले एक स्मार्टफोन निर्माणमा काम गरिरहेको छ । साइबर जासूसहरुले फेसबुकका केही महत्वपूर्ण दस्तावेज हात पारेका छन् जसको आधारमा फेसबुकले स्मार्टफोन निर्माण गरिरहेको खुलासा गरिएको हो । हार्डवेयरमा काम गर्ने फेसबुकको एक युनिटले गत […]
महिनावारी हुँदा महिलाले रक्तश्रावका साथै अन्य पीडा पनि सहनुपर्ने हुन्छ । केही महिलामा महिनावारीपूर्व स्तन सुन्निने र दुखाईको समस्या हुने गर्दछ । थुप्रै महिलाले यतिबेला स्तनमा गाँठो जस्तो पनि महसुस गर्दछन् । हुन त स्तनमा […]